Owayedlalela iPirates usethathwe yiPolokwane – umbiko | isiZulu
Owayedlalela iPirates usethathwe yiPolokwane – umbiko
Ufuna ukubuya umqeqeshi owanqoba izicoco kuPirates
Cape Town - IPolokwane City kulindeleke ukuba iqinise isikwadi sayo phambili ngokuthi isayinise umgadli osenesipiliyoni, uTlou Segolela.
Lo mdlali ogijima ohlangothini esiswini, nowayedlalela amaqembu afana nePlatinum Stars kanye ne-Orlando Pirates, uthathwa njengomunye wabadlali abenesivinini esikhulu kwasebeke badlala esigabeni sePremier Soccer League (PSL) kodwa izinto bezilokhu zingamhambeli kahle ngenxa yokungabi namgqigqo kanye nokulimala eminyakeni eyedlule.
Kodwa-ke ukujoyina iCity kungalivuselela ikusasa lika 'Sox' njengoba ezobe egijima nabadlali abafana noRodney Ramagalela kanye noPuleng Tlolane, abadlala ibhola elihlaselayo.
Ngokombiko weKickOff, lo mdlali oneminyaka engu-28 ubudala, noseke wawina iligi, usenze isivumelwano neRise and Shine kanti sizomenyezelwa maduzane yileli qembu elihleli endaweni yesihlanu ku-log.
USegolela useshaye amagoli angu-21 waphinde walekelela ekushayweni kwamagoli angu-23 emidlalweni engu-163 ebholeni elisezingeni eliphezulu kanti uza nesipiliyoni esikhulu njengoba eseke wadlala nakuCAF Champions League.